Google Play Awards 2019 - တစ်နှစ်တာအနိုင်ရရှိသည့်အက်ပလီကေးရှင်း | Androidsis
Google I / O 2019 သည်ယခုအခါတရားဝင်ဖြစ်ပြီးကုမ္ပဏီသည်ယခုနှစ်အကုန်ပိုင်းတွင်အကောင်းဆုံး application များကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်ယခုနှစ်ထုတ်ဝေမှု၏အစကိုဂုဏ်ပြုချင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာ Google Play ဆုပေးပွဲ ၂၀၁၉ အကြောင်းပါ။ နှစ်စဉ်ကုမ္ပဏီသည်များသောအားဖြင့်ဤဆုများကိုစီစဉ်ပေးသည်၊ ၎င်းတွင်သူတို့သည် Android အတွက်အကောင်းဆုံးအပလီကေးရှင်းများနှင့်ဂိမ်းများကိုအသိအမှတ်ပြုရန်ကြိုးစားသည်။ ကျနော်တို့ 2018 ခုနှစ်တွင်မြင်သည်အတိုင်း.
ဒီ Google Play Awards 2019 မှာလျှောက်ထားချက်ကိုးခုကိုတွေ့ရတယ်သူတို့ရဲ့လယ်ပြင်၌အကောင်းဆုံးသရဖူဆောင်းခဲ့ကြရသော။ ဤဆုနှင့်အတူကုမ္ပဏီသည်ဤအက်ပလီကေးရှင်းများ၏ကောင်းသောအလုပ်ကိုအသိအမှတ်ပြုရန်ရှာသည်။ အကျိုးဆက်အနေဖြင့်ထိုသူအပေါင်းတို့၏လူကြိုက်များမှုသည်စတိုးတွင်တိုးပွားလာသည်။
1 အကောင်းဆုံးအသုံးပြုနိုင်မှုအတွေ့အကြုံ - Envision AI
2 Best Wellness App: Woebot
3 အကောင်းဆုံးလူမှုရေးအကျိုးသက်ရောက်မှု: Wisdo
4 အကောင်းဆုံး Living ည့်ခန်းအတွေ့အကြုံ - Neverthink
5 အခြေခံအကျဆုံးအက်ပလီကေးရှင်း - ဖြည်းဖြည်း
6 တီထွင်မှုအများဆုံး app - Tick Tock
7 ထွန်းသစ်စစျေးကွက်များအတွက်အကောင်းဆုံး app: Canva
8 အလှဆုံးဂိမ်း: Shadowgun Legends
9 အများစုမှာသဲဂိမ်း: Marvel Strike Force
အကောင်းဆုံးအသုံးပြုနိုင်မှုအတွေ့အကြုံ - Envision AI
ဤပထမအမျိုးအစားတွင်၎င်းကိုဖွင့်သောအသုံးချပရိုဂရမ်များကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည် မသန်စွမ်းသူများသို့မဟုတ်အထူးလိုအပ်ချက်များရှိသူတို့၏စမတ်ဖုန်းနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှု။ ဤကိစ္စတွင် Envision AI သည်အနိုင်ရသူဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကင်မရာဖြင့်သင်ရိုက်ကူးသမျှကိုအသံဖြင့်ဖော်ပြပေးသည့်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးစာဖြင့်ရေးသားထားသောစာသားပင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုလျှောက်လွှာတစ်ခုအနေဖြင့်အသုံးပြုပြီးလူများအတွက်များစွာအထောက်အကူပြုနိုင်သည် အမြင်အာရုံပြproblemsနာများ။
ဒီ application ကို Android အတွက်အခမဲ့ရယူနိုင်ပါတယ်။ အတွင်း၌ရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့သည်ဝယ်ယူမှုကိုတွေ့သည်။
ရေးသားသူ: Envision Technologies က BV
Best Wellness App: Woebot
ဂူဂဲလ်ပလေးဆု၏ဒုတိယအမျိုးအစားမှာဤဖြစ်သည်။ အနည်းဆုံးဂူဂဲလ်ပြောသည့်အတိုင်းအသုံးပြုသူများသည်သူတို့ကိုယ်တိုင်၏အကောင်းဆုံးဗားရှင်းကိုအသက်ရှင်ရန်ခွင့်ပြုသည့်အသုံးချပရိုဂရမ်များကိုကျွန်ုပ်တို့တွင်တွေ့ရှိရသည်။ ဒီကိစ္စမှာအနိုင်ရသူက WoeBot ဖြစ်ပြီး၊ အချို့ကသင်ကဲ့သို့မြည်မည်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ chatbot နဲ့စကားပြောနိုင်တဲ့ app တစ်ခုကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ စိတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်နယ်မှတ်ပုံတင်ရန်အရာအတွက်။ ၎င်းသည်အခြားအပြုအမူသို့မဟုတ်သိမြင်မှုဆိုင်ရာကုထုံးဆိုင်ရာကိရိယာများကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးသည်။ လူများစွာသည်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းကဲ့သို့သောသူတို့၏စိတ်အခြေအနေအကြောင်းပိုမိုသိရှိရန်အတွက်အကူအညီဖြစ်စေနိုင်သည်။
ရေးသားသူ: Woebot ကျန်းမာရေး
Google Play Awards သည်၎င်းကိုအသုံးချဆော့ဖ်ဝဲလ်များကိုဆုချခြင်းဖြစ်သည် သူတို့ရဲ့လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအတွက်အပြုသဘောသက်ရောက်မှုဖန်တီးခဲ့ကြသည်။ ဤအမှု၌အနိုင်ရသူမှာ Wisdo ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လူတိုင်းကိုသူတို့တွေ့ကြုံခဲ့ဖူးသောအတွေ့အကြုံများကိုမျှဝေရန်ခွင့်ပြုသည့် application ဖြစ်သည်။ လျှောက်လွှာကို ကျေးဇူးတင်၍ သင်သည်တူညီသောအရာမှတစ်ဆင့်ရောက်ရှိလာသောလူများကိုရှာနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်ဒီလူတွေကဒီအခြေအနေကိုဘယ်လိုကျော်လွှားပြီးရှေ့ဆက်သွားနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာရှာဖွေဖို့ဒီကိစ္စမှာအထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်။ အက်ပ်တွင်ဖြစ်ရပ်များအမျိုးအစားများစွာရှိသည်။
၎င်းကို Android တွင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းတွင်အတွင်း၌ ၀ ယ်ယူမှုများသို့မဟုတ်ကြော်ငြာများမရှိပါ။
Wisdo၊ ပျော်ရွှင်သောနေ့ရက်များကို တွေ့ကြုံခံစားပါ။
ရေးသားသူ: Wisdo, LTD ။
အကောင်းဆုံး Living ည့်ခန်းအတွေ့အကြုံ - Neverthink
Neverthink သည် Play Store တွင်အရာရာအားလုံးပါဝင်နိုင်သည့် application တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင့်အားဗွီဒီယိုများစွာမတွေးဘဲဗွီဒီယိုကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြုသည့်အက်ပ်တစ်ခုဖြစ်သည် ထိုအချိန်လေးများအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည် ကျနော်တို့နောက်ခံဆူညံသံအချို့ချင်တယ်, ဒါပေမယ့်ငါတို့သိပ်ရှာဖွေချင်ကြဘူး။ ထို့ကြောင့်၊ ဤအက်ပလီကေးရှင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့၌အကြောင်းအရာလိုင်း ၄၀ ရှိသည်။ ၎င်းတို့အနက်မှတစ်ခုကိုသာရွေးချယ်ပြီး app ၏အယ်ဒီတာများကကျွန်ုပ်တို့အတွက်ကျန်လိမ့်မည်။ ထို့အပြင်၎င်းကို Chromecast နှင့်အသုံးပြုနိုင်ပြီး၎င်းကိုအကြောင်းအရာသို့ TV သို့ပေးပို့နိုင်သည်။
Chromecast ၏အားသာချက်များကိုယူရန်အကောင်းဆုံး application များ
ဤအပလီကေးရှင်းကို Android တွင်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲသည်။ အတွင်းပိုင်းမည်သည့်ဝယ်ယူမှုသို့မဟုတ်ကြော်ငြာတွေမရှိ။
အခြေခံအကျဆုံးအက်ပလီကေးရှင်း - ဖြည်းဖြည်း
သေချာသည်မှာလက်ရှိခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်ကွဲလွဲနေသော Google Play Awards 2019 ၏အသိအမှတ်ပြုမှုကိုရရှိသည်။ ၎င်းသည်စာတိုပေးပို့ရေးနှေးကွေးသောအက်ပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီကိစ္စမှာငါတို့ဖုန်းထဲမှာ application တစ်ခုကိုသုံးပြီးစာနဲ့စာတွေပို့နေသလိုပဲ။ ဤအခါသမယတွင်ကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်နေရာမှမဆိုဝါသနာပါသူများနှင့်စာအဆက်အသွယ်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်တကယ့်စာတစ်စောင်ကဲ့သို့ရောက်ရှိရန်အချိန်များစွာကြာသည်။ အထူး app တစ်ခု။
ဒီအက်ပလီကေးရှင်းကို Android မှာဒေါင်းလုပ်ဆွဲသည်။ အတွင်း၌ဝယ်ယူမှုများရှိသော်လည်း
ဖြည်းညှင်းစွာ - Verbindung zur Welt
တီထွင်မှုအများဆုံး app - Tick Tock
အချို့သောနိုင်ငံများတွင်ပင်ဖယ်ရှားပစ်လိုက်သည့်အငြင်းပွားဖွယ်လူမှုရေးကွန်ယက်နှင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့မရောထွေးသင့်ပါ။ ဤကိစ္စတွင် Tick Tock သည်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည် ကပူးပေါင်းဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်၊ သင်သည်အခြားသူတစ် ဦး နှင့်ကစားရန်လိုသည်၊ ဂိမ်းတွင်ရှိသည့်ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်များ၌တွေ့ရသည့်ပဟေcompleteိများကိုသင်ပြီးအောင်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ တစ်ခုချင်းစီသည် screen ၏ထက်ဝက်သာမြင်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ပူးပေါင်းခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသောအရာဖြစ်သည်။ အုပ်စုတွင်အလုပ်လုပ်ရန်သင်ယူရန်နောက်ထပ်နည်းလမ်း။
၎င်းကို Android တွင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ယူရို ၃.၃၉ ကျသင့်သည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်, အတွင်း၌အဘယ်သူမျှမဝယ်ယူမှုသို့မဟုတ်ကြော်ငြာတွေရှိပါတယ်။
Tick ​​Tock: နှစ်ယောက်အတွက်ပုံပြင်
စျေးနှုန်း: € 3,39
ထွန်းသစ်စစျေးကွက်များအတွက်အကောင်းဆုံး app: Canva
လူမှုရေးကွန်ရက်များ (သို့) အခြေအနေအမျိုးမျိုးတွင်ဓာတ်ပုံများထုတ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြုထားသောလူသိများသောအက်ပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင် Google Play Awards ကတန်ဖိုးထားသည် ထွန်းသစ်စစျေးကွက်များအတွက် app ၏ optimization နှင့်လိုက်လျောညီထွေ။ သူတို့ဟာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ်။
၎င်းမှာ Android ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲသည်။ အခမဲ့ဖြစ်သည်။
Canva- ဒီဇိုင်း၊ ဓာတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယို
အလှဆုံးဂိမ်း: Shadowgun Legends
ဤအခါသမယတွင် Google Play Awards သည်ဂိမ်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောဂရပ်ဖစ်သို့မဟုတ်တီထွင်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာဂရပ်ဖစ်များဖြင့်အကဲဖြတ်ရန်ကတိက ၀ တ်ပြုထားသည်။ ကျနော်တို့တစ်တွေ multiplayer သေနတ်သမားနှင့်ရင်ဆိုင်နေရကြသည်, အစအခန်းကဏ္-- ဂိမ်းဂိမ်း၏ဒြပ်စင်ရှိပါတယ်။ ၎င်းသည်အလွန်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောဂိမ်းတစ်ခုအနေဖြင့်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။
၎င်းကို Android တွင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်သည်။ အတွင်း၌ရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ ယ်ယူမှုများနှင့်ကြော်ငြာများကိုတွေ့ရသည်။
ရေးသားသူ: MADFINGER အားကစားပြိုင်ပွဲ
အများစုမှာသဲဂိမ်း: Marvel Strike Force
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်အခြားဂိမ်းတစ်ခုသည်ဤ Google Play Awards 2019. တွင်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ ဤတစ်ကြိမ်တွင် Marvel စကြ ၀ onာကိုအခြေခံသည့်ဂိမ်းသည် Android အတွက်နောက်ဆုံးပေါ် ဒါဟာမဟာဗျူဟာမြောက်တိုက်ခိုက်ရေးဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်, လည်းအခန်းကဏ္-- ကစားဂိမ်း၏ဒြပ်စင်ရှိပါတယ်။ ၎င်းတွင်ဇာတ်ကောင်များစွာရှိပြီး Marvel မှသူရဲကောင်းများနှင့်လူဆိုးများနှင့်အတူရှိသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်၎င်း၏ထူးခြားသောဂရပ်ဖစ်အတွက်ထင်ရှားသည်။
ဒီဂိမ်းကို Android ပေါ်မှာဒေါင်းလုပ်ဆွဲသည်။ ကျနော်တို့အတွင်းပိုင်းဝယ်ယူမှုကိုရှာဖွေပေမယ့်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » Google Play Awards 2019 - ဤနှစ်၏အကောင်းဆုံး app များဖြစ်သည်
အနိမ့်အကွာအဝေးတွင်တိုက်ခိုက်လိမ့်မည်ဟု Moto E6 နောက်လာမည့် Motorola မိုဘိုင်း၏ပြန်ဆိုများကိုစစ်ထုတ်သည်